कोरोना लागेका रसियाका प्रधानमन्त्रीले राजिनामा दिए: ओलीको राजिनामा कहिले ? - AIM Khabar
गृह पृष्ठ > Breaking > कोरोना लागेका रसियाका प्रधानमन्त्रीले राजिनामा दिए: ओलीको राजिनामा कहिले ?
Breaking नेपाल समाचार विश्व समाचार
May 9, 2020 May 9, 2020 Raju Thapa163
मदन बस्नेत, टाेराेन्टाे । ९ मे, २०२० । रसियाका प्रधानमन्त्री मिखाएल मिसुतिनले आफुलाई कोरोना संक्रमण भएलगत्तै प्रधानमन्त्रीको पदबाट राजीनामा दिएका छ्न्।
५४ वर्षीय मिसुतिन गत जनवरीमा प्रधानमन्त्री चयन भएका थिए। १४ दिनको सेल्फ आईसोलेसनमा बस्दा मुलुकको दैनिक कामकाजमा असर पर्ने भन्दै नैतिकताको आधारमा राजिनामा दिएका हुन्। उनको त्यो निर्णयले बिश्वका अन्य मुलुकका शासकहरुलाई भने निकै अप्ठेरोमा पारेको बिश्लेषण गर्न थालिएको छ।
नेपाल यतिबेला कोरोनाको संक्रमणको कारण लक डाउनमा छ र त्यति नै बेला भारतले सिमा मिचेर सडक निर्माण गरेको मुद्दालाई लिएर प्रदर्शनकारीहरु सडकमा उत्रिएको अबस्था छ। हिजो देखि बर्खे अधिवेशन – बजेट सत्र पनि सुरु भईसकेको छ तर प्रधानमन्त्री केपी ओली बिरामी भएर आराम गर्नु पर्ने बाध्यताले बालुवाटारमा नै संकुचित भएका छ्न्। बिरामी कै कारण र संक्रमणको डरले उनी, हिजो संसदमा समेत जान सकेनन्, अनुपस्थित रहे।
लामो समयदेखि बिरामी रहेका उनको हालसालै मात्रै दुबै मृगौला प्रत्यारोपण गरिएको हो। त्यसैले उनी सिंहदरबार पनि नगई बालुवाटारको निजी निवासमा नै आराम गरिरहेका छ्न् र त्यहीँ बाटै पार्टी र सरकार चलाईरहेका छ्न्।
कोरोनाको संक्रमणको कारण रसियाका प्रधानमन्त्रीले नैतिकताको आधारमा राजीनामा दिईसकेको परिप्रेक्ष्यमा प्रधानमन्त्री ओलीले त्यसको अनुसरण कहिले गर्लान् ? आम नेपालीले बडो उत्सुकताका साथ हेरिरहेका छ्न्।
अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रम्पद्वारा “डब्लूएचओ” माथी गम्भीर आरोप !